Intaba-mlilo iMayon ePhilippines izovumbuka maduze | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuzoqhuma intaba-mlilo iMayón ePhilippines
Kule mpelasonto intaba-mlilo iMayon ePhilippines yaqala ukusebenza. Imifudlana yodaka isiqalile ukuqhuma, futhi kungenzeka ukuqhuma okuqhumayo.
Ukunciphisa imithelela engaqhuma ukuqhuma, Bangu-15.000 XNUMX abantu asebesusiwe manje. Siyini isimo seMayón?
1 Ukudilika kwenhlabathi kweMagma
2 Intaba-mlilo iMayón
Ukudilika kwenhlabathi kweMagma
NgoMsombuluko ebusuku amaqembu e-magma okuqala aqala ukubonakala. Namuhla isifinyelele ebangeni elingamakhilomitha ama-2 ukusuka emgodini. Intaba-mlilo itholakala cishe emakhilomitheni angama-350 eningizimu-mpumalanga yeManila.
Njengoba zibhekene nokuqhuma kobudlova kwentaba-mlilo, iziphathimandla gcina izinga lokuxwayisa 3 (okubucayi) out of a scale of 5. Ukuqhuma okungenzeka kuzoba nodlame olukhulu futhi kudale umonakalo omkhulu. Ukuqhuma sekusondele, yize kungathatha izinsuku noma amasonto ukwenzeka.
Indawo ethathwa njengendawo eyingozi ngenxa yokuba seduze kwentaba-mlilo iphakathi kwendawo engamakhilomitha ayi-7 ukusuka emgodini wentaba-mlilo. Inani labantu abayi-15.410 abakule ndawo esengozini bakhishwe ukuze bagweme ukufa okungenzeka. Babekwe ezindaweni zokukhosela zesikhashana, ezikoleni nasezikhungweni zezemidlalo.
Le ntabamlilo iqhume cishe izikhathi ezingama-50 emakhulwini amahlanu edlule. Esinye sezifo zakhe zokuqala saqala ngoMgqibelo kwathi amafu ampunga akhutshwa kushiya umlotha endaweni ezungezile.
NgeSonto eledlule kuphinde kwaquleka ezinye ezimbili okwadala ukuwa kwamatshe ayi-158. Yikho lokhu kudilika komhlaba okwenze umphakathi waxwayisa futhi waqala ukukhipha.
Umsebenzi wentabamlilo uqashelwe ngenxa yokubhonga okukhulu, imvula yomlotha nephunga elinamandla le-sulfuric acid.
Manje kufanele silinde ukuqhuma kwenzeke nokuthi, yize kunodlame olukhulu, kubangela umonakalo omncane kakhulu kubantu nakwimpahla yabo. Ngenxa yezindlela zosizo, abantu abaningi bazokugwema ukulinyazwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Kuzoqhuma intaba-mlilo iMayón ePhilippines